Hery Rajaonarimampianina : “Manaja ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra ny Filoha” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Manaja ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra ny Filoha”
15/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Na inona na inona hevitra tsy hitovizana amiko, dia tsy azonareo hiadian-kevitra amiko kosa ny fanajako ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny “Fotoam-bita” laharana faha-11,izay namelabelarany ny mikasika ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika. Malalaka ny mpanao gazety miteny sy manoratra. Diso malalaka loatra aza izany fanehoan-kevitra izany. “Fahalalahana hanao inona moa izany ireny mbola takian’ny sasany ireny. Misy aza mahavatra mitety firenena mihitsy manaratsy ny mpitondra. Ny sasany indray dia mialokaloka ao ambadiky ny fitakiana sendikaly kanefa fanakorontanana ny firenena no ketrehiny”, hoy ny filoha nametra-panontaniana, manoloana ny fitakian’ny sokajin’olona sasany mialokaloka ao ambadik’ireny saritsarim-pitakiana fahalalahana maneho hevitra ireny.
Tsy misy antony tokony hisian’ireny hetsika mitaky ny fahalalahana maneho hevitra ireny mihitsy raha jerena amin’ny maso tsy miangatra ny zava-misy eto amintsika. Filam-boatsiary sy fitiavana te- hanakorontana fotsiny ihany mantsy ireny. Nisy, araka izany, ny hafatra niantefa manokana ho an’ny mpanao gazety momba izay fahalalahan’ny fanehoan-kevitra izay ihany. “ Aza ampiasaina hanapoizinana ny fiaraha-monina ny fahefana eo am-pelatananareo. Ampiasao ho fanorenana sy ho an’ny tombontsoa iombonana. Lazao ny marina ary aza manao ny asan’ny mpanao politika”, hoy ny hafatry ny filoha ho an’ny mpampita vaovao rehetra. Ho setrin’izany kosa dia nanome baiko hentitra izy ny mba hanokafan’ny tomponandraiki-panjakana isan’ambaratonga ny loharanom-baovao ara-potoana ho an’ny mpanao gazety.
Na malalaka aza ny fanehoan-kevitra dia napetraka ny lalàna ho fiarovana ny zon’ny hafa. Tsy midika ho fanapenam-bava mihitsy ny lalàna napetraka, fa voasoratra ao anatin’ny Lalàmpanorenana andininy faha-10 sy faha-11 izany. “ Raha nasiana fepetra ny fanehoan-kevitra an-dalambe dia fiarovana ny fiainam-piarahamonina sy fiarovana ny zon’ny hafa izany”, hoy ny Filoha. Niantso ny olom-pirenena rehetra ny tenany hahay handanjalanja ny fandraisana ny vaovao. “Araho amin’ny maso tsy miangatra ny fizotry ny raharaham-pirenena mba tsy ho voafitaka ianareo. Aoka tsy hihinana amam-bolony ianareo”, hoy hatrany ny Filoha.
Nandritra ny fotoam-pamaranana ny fivorian’ny Frankôfônia ka nanaovan’ireo tompon’andraikitra valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety teny amin’ny Cci Ivato no nilazan’ny sekretera jeneralin’ny Oif, Michaëlle Jean fa tsy maintsy miara-mientana isika amin’ny ady amin’ny fampihorohoroana satria ...Tohiny
Distrikan’Isandra : Sambany nahazo rano fisotro madio